हिटरले जलेर इन्जिनियर दम्पतिको मृत्यु : 'झ्याल खुला राखेर मात्र हिटर बालौं'
हिटरले जलेर इन्जिनियर दम्पतिको मृत्यु : ‘झ्याल खुला राखेर मात्र हिटर बालौं’
काठमाडौं । पुसमा ग्यास हिटरका कारण भएको आगलागीमा परी काठमाडौंको कलंकीमा इन्जिनियर दम्पत्ती पुष्कर जोशी र अप्सरा श्रेष्ठको ५ दिनको फरकमा निधन भयो। उनीहरूका डेढ वर्षीय छोरा उपचाररत छन्।
हिटरमा जडित सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भएर आगलागी भएको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीको छ। आगालागी भइरहँदा इन्जिनियर दम्पत्तीले झ्यालको सिसा फोडेका थिए। तर, उनीहरू कसैगरी पनि कोठा बाहिर निस्कन सकेनन्।
आगलागीपछि घटनास्थल पुगेको प्रहरीले उनीहरूलाई नजिकैको शहीद मेमोरियल अस्पताल पुर्याएको थियो। पुख्र्यौली घर बैतडी भएका पुष्कर जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र उनकी श्रीमती अप्सरा सडक विभागमा कार्यरत थिए। कलंकीको अस्पतामा उपचार सम्भव नभएपछि उनीहरूलाई कीर्तिपुर अस्पताल पुर्याइएको थियो।
महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सामुदायिक स्वास्थ्य विभागका उपप्राध्यापक डा. खेम कार्कीका अनुसार हिटर वा कोइलाबाट कोठा तताउने क्रममा अक्सिजनको खपत कम हुन्छ र कार्बन मोनोअक्साइड तथा कार्बनडाइ अक्साइडजस्ता विषालु रसायन बढी उत्सर्जित हुन्छन्।
कोठाको झ्याल ढोका थुनेर हिटर वा कोइलाबाट कोठा तातो बनाउँदा विषालु रसायन बाहिर निस्कन पाउँदैनन् र मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्छन्। हेमोग्लोबिनले अक्सिजनको सप्लाइ (अक्सि–हेमोग्लोबिन) गर्नुपर्नेमा कार्बन मोनोअक्साइड (कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन) लाई शरीरमा फैलाउने डा. कार्की बताउँछन्।
“विष मानिने कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन शरीरमा फैलिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसले शरीरमा अक्सिजनको प्रभाव रोकेर मानिसलाई बेहोस बनाउँछ र मानिसको मृत्यु हुन्छ।’’ डा. कार्की कोइला वा हिटरको माध्यमबाट कोठालाई न्यानो बनाउनु परे झ्याल ढोका खुला राख्न सुझाव दिन्छन्।
“यसो गरे विषालु रसायनहरू कोठाबाट बाहिर निस्किन पाउँछन्,” उनी भन्छन्। काठमाडौंमा जाडो बढेसँगै हिटर प्रयोगकर्ता बढेका छन् । होसियारी नअपनाउँदा ज्यान जानसक्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
Tagsइन्जिनियर दम्पत्ती हिटर